12 Ebe Dị Totụnanya Iji Gaa na Russia | Save A Train
Home > Zụọnụ njem Russia > 12 Ebe Dị Totụnanya Iji Gaa na Russia
(Emelitere ikpeazụ On: 29/06/2021)
Gafee Siberia taiga, ọdọ mmiri kacha ochie Baikal, ọhịa Kamchatka na Moscow, ndị a 12 ebe dị ịtụnanya ị ga-aga na Russia ga-ewepụ ume gị. Naanị họrọ ụzọ njem gị, tinye akwa mkpuchi ma ọ bụ akwa mmiri ozuzo maka ihu igwe aghụghọ, ma soro anyi gaa Russia.
1. Ugwu Altai
N'etiti Russia, Mongolia, China, na Kazakhstan Altai mpaghara bụ ebe obibi 700 ọdọ mmiri, ọhịa, na nke kachasị elu nke Siberia nke Mt Belushka, na 4506 m. Altai ebughi oke mmadu, ya mere, ị ga-ahụ na emetụtaghị ya site na mmepeanya nke oge a, na ọ bụ naanị anụ ọhịa na anụ ọhịa ga-ekele gị.
Na mgbakwunye, ma ọ bụrụ na ị bụ onye njem dị egwu, mgbe ahụ njem ọ bụla nke 1499 glaciers na Altai ga-eju gị anya. Ọzọkwa, rafting n'ime osimiri Katun na osimiri Biya kachasị ukwuu bụ ahụmịhe epic. N'akụkụ aka nke ọzọ, safari anụ ọhịa nwere ike bụrụ nhọrọ izu ike karị. Nwere ike ịnweta ohere agụkọ iji zute agụ owuru, ibex, lynx, na karia 300 ụdị nnụnụ. Enweghị mgbagha ọ bụla, Altai bụ otu n'ime ihe kacha mma anụ ọhịa ebe na Europe na ebe dị ịtụnanya ịga leta Russia.
Kazan bụ ụlọ elu ụlọ na Tatarstan Republic, ọdịda anyanwụ Russia. Ebe etiti Tatar dị n'akụkụ Osimiri Volga, na osimiri Kazanka, ma were obodo nke ise kachasị ukwuu na Russia.
Dị ka e kwuru n'elu, ihe owuwu nke isi saịtị Kazan ga - ejide ihu gị na agba ya na acha ọcha na acha anụnụ anụnụ na imewe. Ọmụmaatụ, Kazan Kremlin, ihe nketa ụwa, Kul Sharif Mosque, Katidral Epiphany, ndị a bụ ole na ole n’ime ebe ndị ị nwere ike ịga iji mụtakwuo banyere omenala ndị Tatar.
3. Ebe Dị Totụnanya Iji Gaa na Russia: Lake Baikal
Ọdọ mmiri kacha ochie n’akụkọ ihe mere eme n’ụwa, Ọdọ mmiri Baikal amalitela 25 nde afọ gara aga. Igwe mmiri na oke mmiri ya na-eme ka Ọdọ Baikal bụrụ ihe na-adọrọ adọrọ na Siberia, na ọkọchị, ị nwere ike ịbanye n'ime mmiri kachasị ọcha na Europe, ma ọ bụ nyochaa anụ ọhịa kacha ụkọ n'ụwa.
Isinggbagharị, na-enwe mmasị na ụkwụ Baikal na ụkwụ, ma ọ bụ ịnwe anụ oriri na ọ ofụ onụ n'ụsọ ọdọ mmiri kachasị ịtụnanya na Russia, ị ga-enwe njem nleba anya nke uche. Osisi pine gbara ya gburugburu, Taiga na ọzara bụ a ụgbọ okporo ígwè njem site na obodo kacha nso dị Irkutsk, ebe ọzọ na-adọrọ mmasị ileta na Russia. Iji bulie ya niile, ị nwere ike ịmalite njem Baikal gị site na China ma ọ bụ Russia, site na ụgbọ oloko Trans-Siberia, ndaeyo m̀m or ini etuep.
Obodo Tsars na ulo-elu akukọ, Saint Petersburg emeela ka ndị na-ede uri na ndị edemede dere akwụkwọ. Ọ bụrụ na ịgabeghị Saint Petersburg, ị hụbeghị Russia anya, n'ihi na obodo a bụ otu n’ime ihe ngosi ama ama ama ama na Russia.
Ihe Nkume, Catherine Obí, na Winter Obí, na ubi Peterhof, bụ naanị na-akpali akpali. Omume ọ bụla ị na-eme ga-eme ka ị rute nso na akụkọ ifo nke Russia ma mee ka ị maa mma. Akụkọ ihe mere eme na ihe owuwu nke Saint-Petersburg na-eme ka ọ bụrụ ebe ọ ga-eleta na Russia na n'ezie otu n'ime elu 12 ebe kachasị ịtụnanya na Russia.
Anụ ọhịa, buru ibu, mara mma, na ihe ijuanya, Kamchatka na-echere gị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na njedebe nke ụwa. Ala nke Kamchatka dị na mpaghara ọwụwa anyanwụ Russia, ulo ka ihe fọrọ nke nta 300 ugwu mgbawa, ọtụtụ na-arụsi ọrụ ike, na echiche kachasị emetụ n'ahụ banyere Oke Osimiri Pasifik na ọzara Russia. Ọ bụ mmadụ ole na ole maara ọrụ ebube dị na Kamchatka, ya mere Kamchatka bụ ebe kachasị ịtụnanya na ebe pụrụ iche ịga leta Russia.
Will ga-ahụ na ọ naghị adị mfe ịbịaru ọrụ ebube nke Kamchatka, n'ihi ọnọdụ ya dịpụrụ adịpụ. Otú ọ dị, mgbe ị na-eme, ọ ga-eju gị anya site na nnabata, eke ebube: na iyi dị ọkụ, osimiri, anụ ọhịa, na n'ezie ugwu mgbawa. A njem mgbawa ugwu bụ otu n'ime ihe kachasị njọ na ihe na-akpali akpali ịme na Kamchatka. Ọmụmaatụ, Klyuchevskaya Sopka bụ elu kachasị elu na ugwu mgbawa na-arụ ọrụ, ebe achọrọ maka ọtụtụ ndị njem na Kamchatka.
6. Ebe Dị Totụnanya Iji Gaa na Russia: Sochi
N’ebe ụsọ Oké Osimiri Ojii, gbara ya gburugburu na ugwu ahihia ndu, Sochi bụ oge ezumike ezumike kachasị elu na Russia. Sochi ama ama nke ukwuu na obodo ahụ na-adọrọ mmasị 4 nde mmadụ kwa afọ, n'ihi na ha ezumike oge ezumike n’akụkụ oké osimiri.
Na mgbakwunye na sunbathing, Sochi Arboretum, ma ọ bụ obere Italy, zuru oke maka echiche panoramic banyere Oké Osimiri Ojii na Sochi, ma na-awagharị n'ugwu ndị na-eme ekwuru na-atọ ụtọ.
ikwubi, ọ dịghị ebe ka mma maka ezumike ezumike, na Russia ịke, Russia karịa na Sochi. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ị nwere ike isi Moscow gaa Sochi na ebe ọ bụla na Russia, tinyekwara na Central Asia na Eastern Europe, ụgbọ okporo ígwè.
Veliky Novgorod nwere ebe nsọpụrụ na anyị 12 ebe kachasị ịtụnanya ileta na Russia. Nwere ike ịsị na nnukwu Novogrod bụ ebe Russia bịara bụrụ mba ukwu ọ bụ taa. Laghachi na 9th na narị afọ, Veliky Novogrod bụ ebe Onyeisi Rurik nọ, na 862 kwupụtara ọkwa Russia nke oge a ma mee Novogrod ebe etiti azụmahịa, ochichi onye kwuo uche ya, na mmuta n'etiti Russia na Balkan.
Ya mere, ma ọ bụrụ na ị nọ na akụkọ ihe mere eme Russia, Veliky Novogrod kwesịrị ịdị na ndepụta ịwụ gị. Ebe e wusiri ike nke Novogrod Kremlin, Katidral St.. Sophia bụ onye ezi omume 2 nke saịtị ga-ahụ na Veliky Novogrod nke ga-eju gị anya. Iguzo ọtọ 800 afọ, chegodi akuko na ihe ndi mere ebe a.
8. Ebe Dị Totụnanya Iji Gaa na Russia: Agwaetiti Olkhon
Ọdọ Baikal buru ibu, na anyị ga-agbakwunye ebe ọzọ dị ịtụnanya mmadụ kwesịrị ileta mgbe ọ nọ na Russia. Agwaetiti Olkhon bụ agwaetiti kasị ukwuu n’Ọdọ Mmiri Baikal, Yiri nke New York City. Agwaetiti a bu ulo eche oke ohia, okwute, na naanị 150000 bi, N'adịghị ka New York City.
Otú ọ dị, Agwaetiti Olkhon bụ ebe na-ewu ewu maka ndị njem gaa Lake Baikal. Nke a pụtara na oge ọkọchị ị nwere ike ịbịa igwu mmiri na mmiri ọdọ mmiri doro anya ma banye n'ime ọdọ kachasị omimi n'ụwa.. N'oge oyi, n'akụkụ aka nke ọzọ, ị nwere ike ịbịa nwee mmasị na ọdọ mmiri kacha ochie n'ụwa, ke ini etuep ọfọn̄, oyi kpọnwụrụ ma mara mma na ọcha.
Agwaetiti ahụ bụ ụgbọ mmiri na-aga Sakhuyurta na ndị Buryat kwenyere na ha bụ 1 nke osisi ise nke uwa Shamanic. N'ezie, ị nwere ike ịchọta nkume shaman dị n'etiti agwaetiti ahụ.
Ọ bụrụ na ị nọ na njem Trans-Siberia gị, mgbe ahụ ị nwere ike ịkwụsị na Irkutsk, isi obodo na-akwadoghị iwu nke Ebe Ọwụwa Anyanwụ Siberia. 19narị afọ nke narị afọ nke ụka Russia, ụlọ agba aja aja na-acha anụnụ anụnụ, Saịberịa Taiga, Irkutsk bụ obodo mara mma mara mma.
Ọzọkwa, Irkutsk bụbu ebe a dọọrọ n'agha nke ọtụtụ ndị a ma ama na ndị amamihe Russia na Siberia, ọ bụrụ na gọọmentị na-achị achị kpebiri na ha gara imegide ike. Ya mere, A na-egosipụta ọtụtụ ọrụ abụ na akwụkwọ ọgụgụ ndị Russia na Irkutsk na Siberia taiga. Otú o sina dị, taa Irkutsk bụ obodo mara mma: mgbochi 13 nke osisi ụlọ nke narị afọ nke 18, Nzukọ nke Onye-nzọpụta, na Bronshteyn Gallery bụ ole na ole n'ime ebe ị kwesịrị ịga.
10. Ebe Dị Totụnanya Iji Gaa na Russia: Resolure Nature Reserve
N’ikpere Osimiri Yenisei, Ebe nchekwa okike Stolby dị na ndịda obodo Krasnoyarsk. The idobere adịghị ada na ịma mma si n'elu 5 ọdịdị mara mma kachasị mma na Europe. Mgbe njem ogologo na ụgbọ okporo ígwè Trans-Siberia gafee Russia, ị ga-ahụ na-awagharị awagharị na-ewuli mmụọ gị kulie ụra na mkpụrụ obi na-ero ụra.
Stolby nwere 5 isi agba-nzobe ụzọ ụkwụ, ya mere na ị gaghị efu ụzọ n'ọtụtụ obere ụzọ ụkwụ ọhịa. Ozugbo ị ruru oke ọhịa, ị ga-achọpụta aha si idobere. Enwere 100 stolby - okwute okwute, ụyọkọ dị egwu ma dị ogologo nke stolby n'etiti osisi.
Ga ileta ogige mara mma a mara mma bụ maka ịnụ ụtọ ụdị kachasị mma nke ụdị nne. Enweghị ihe ọ bụla dị ka isi na echiche nke oke ọhịa Russia, n’oge ọkọchị ma ọ bụ n’oge oyi. Otú ọ dị, ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ a oyi njem a ngwa ngwa ihe ncheta na-eyi ọtụtụ n'ígwé, dị ka Siberia na-ajụ ezigbo oyi na snowy.
Agba Arbat, Kremlin na Ogige Uhie, St. Katidral Basil, na osimiri Moskva, Njirimara na kaadi ozi obula, oyiyi, na mpempe banyere Moscow. Otú ọ dị, naanị ruo mgbe ị ga-abanye ụkwụ na saịtị ndị a magburu onwe ha, na i nwere ekele maka ịdị ukwuu na ịma mma ha. Enweghị ajụjụ banyere ọmarịcha amara nke Moscow. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na isi obodo bụ otu n'ime 12 ebe kachasị ịtụnanya ileta na Russia.
Mgbe Moscow na-eku ume, n'okpuruala obodo nke ọdụ ụgbọ ala dịkwa oke mma. Obodo ịga ije na okpuru ala Moscow bụ otu n'ime ihe kachasị mma ịme na Moscow. Ebe a, ị ga - enweta ọtụtụ ozi gbasara nka, imewe, na akụkọ ihe mere eme nke ọ bụla ọdụ, nakwa obodo, n'aka ndị obodo.
12. Ebe Dị Totụnanya Iji Gaa na Russia: Agwaetiti Kizhi
Osisi ụka, otu octagonal ụlọ elu elekere kpamkpam nke osisi, mejuputara ihe puru iche nke Kizhi Pogost. Ihe owuwu a dị egwu nke ndị ọkwá nkà mere, n’otu n’ime agwaetiti ndị dị n’Ọdọ Mmiri Onega. Ọ ga-eju gị anya ịmata na ụdị ụdị a na-ewu ewu n'oge ochie. Oghere osisi ndị a bụ oghere ndị parish ama ama na narị afọ nke 16, na ikekwe na mbụ.
Ọ bụ ezie na ụka abụghị obere ihe ọhụụ na Russia, ụka osisi bụ. Agwaetiti Kizhi bụ ihe atụ magburu onwe ya nke ndị omenkà Russia. Agwaetiti Kizhi bụ a UNESCO ụwa nketa saịtị, na otu n’ime ụwa ebube, dika ihe nile, dabara na ebube na mbara ala.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem a na-agaghị echefu echefu na ndị a 12 ebe dị ịtụnanya na ụgbọ oloko Russia.
You chọrọ Embed anyị blog post “ 12 Amazing Ebe ileta Na Russia ”jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Famazing-places-visit-russia%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#Russia	AmazingRussia	Church	Ọdọ LakeBaikalrussia	Moscow	Ọtụtụ ebe mara mma obodo Russia	SaintPetersburg	Saịberịa	TranSiberiantrain	Njem Russia	Nleta Russia